Jọshụa 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Guatemalan Sign Language Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mexican Sign Language Myanmar Nepali Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Quebec Sign Language Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zulu
10 O wee ruo na ozugbo Adonaị-zidek bụ́ eze Jeruselem nụrụ na Jọshụa ewegharawo E-aị+ ma bibie ya,+ nakwa na o mewo Jeriko+ na eze ya+ ihe o mere E-aị na eze ya,+ nakwa na ndị Gibiọn emewo ka ha na Izrel+ dịrị n’udo nakwa na ha bi n’etiti ha, 2 egwu tụrụ ya nke ukwuu,+ n’ihi na Gibiọn bụ nnukwu obodo, dị ka otu n’ime obodo ndị eze, nakwa n’ihi na ọ ka E-aị ukwuu,+ ndị ikom ya niile bụkwa ndị dike. 3 Adonaị-zidek bụ́ eze Jeruselem+ wee zie ozi zigara Hoham eze Hibrọn+ na Paịram eze Jamọt+ na Jefaya eze Lekish+ na Diba eze Eglọn,+ sị, 4 “Bịanụ nyere m aka ka anyị bibie Gibiọn, n’ihi na o mewo ka ya na Jọshụa na ụmụ Izrel dịrị n’udo.”+ 5 Ha wee zukọta ma gaa, ya bụ, ndị eze ise nke ndị Amọraịt,+ eze Jeruselem, eze Hibrọn, eze Jamọt, eze Lekish, eze Eglọn, ndị a na ndị agha ha niile, ha wee maa ụlọikwuu imegide Gibiọn na ibuso ya agha. 6 Ndị Gibiọn wee zigara Jọshụa ozi n’ebe ha mara ụlọikwuu ha na Gilgal,+ sị: “Ewepụla aka gị n’ahụ́ ndị ohu gị.+ Bịakwute anyị ọsọ ọsọ zọpụta anyị ma nyere anyị aka, n’ihi na ndị eze niile nke ndị Amọraịt bụ́ ndị bi n’ógbè bụ́ ugwu ugwu ezukọtawo ibuso anyị agha.” 7 Jọshụa wee si Gilgal gbagoo, ya na ndị agha ya+ niile na ndị dike ya niile bụ́ dimkpa.+ 8 Jehova wee sị Jọshụa: “Atụla ha egwu,+ n’ihi na m nyefewo ha n’aka gị.+ Ọ dịghị otu onye n’ime ha ga-eguzogide gị.”+ 9 Jọshụa wee bịa ibuso ha agha na mberede. Ọ gara njem abalị ahụ dum wee si Gilgal gbagoo. 10 Jehova wee tinye ha n’ọgba aghara n’ihu Izrel,+ ha wee sụọ ha akwụ na Gibiọn+ ma si n’ụzọ e si agbago Bet-horọn chụrụ ha gawa, gburukwa ha ruo Azika+ na Makida.+ 11 O wee ruo na ka ha si n’ihu Izrel na-agba ọsọ ma nọrọ ná mkpọda obodo Bet-horọn, Jehova mere ka nnukwu akụ́ mmiri ígwé+ si n’eluigwe na-adagbu ha ruo Azika. Ndị akụ́ mmiri ígwé ahụ gburu dị ọtụtụ karịa ndị ụmụ Izrel ji mma agha gbuo. 12 Ọ bụ mgbe ahụ ka Jọshụa gwara Jehova okwu n’ụbọchị Jehova nyefere ndị Amọraịt n’aka ụmụ Izrel, o wee kwuo n’ihu Izrel, sị:“Anyanwụ,+ guzoro otu ebe n’elu Gibiọn,+Gị ọnwa, guzorokwa n’elu ndagwurugwu Aịjalọn.”+ 13 Anyanwụ wee guzo otu ebe, ọnwa akwụrụkwa otu ebe, ruo mgbe mba ahụ bọrọ ọbọ n’ahụ́ ndị iro ya.+ Ọ̀ bụ na e deghị ya n’akwụkwọ Jesha?+ Anyanwụ wee kwụrụ otu ebe n’etiti eluigwe, ọ daghịkwa ngwa ngwa ruo ihe dị ka otu ụbọchị zuru ezu.+ 14 Ọ dịtụbeghịkwa ụbọchị yiri nke ahụ, tupu mgbe ahụ ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị, na Jehova gere ntị n’olu mmadụ,+ n’ihi na Jehova nọ na-eburu Izrel agha.+ 15 E mesịa, Jọshụa na Izrel dum lọghachiri n’ebe ha mara ụlọikwuu na Gilgal.+ 16 Ka ọ dị ugbu a, ndị eze ise a gbara ọsọ+ gaa zoo n’ọgba dị na Makida.+ 17 E wee kọọrọ Jọshụa, sị: “A hụwo ndị eze ise ahụ n’ebe ha zoro n’ọgba dị na Makida.”+ 18 Jọshụa wee sị: “Kwaranụ nnukwu nkume kwachie ọnụ ọgba ahụ, debekwanụ ndị ikom n’ebe ahụ ka ha na-eche ha nche. 19 Ma unu onwe unu, unu eguzokwala otu ebe. Chụwanụ ndị iro unu, unu ga-esikwa n’azụ gbuo ha.+ Unu ekwela ka ha banye n’obodo ha, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu enyefewo ha n’aka unu.”+ 20 O wee ruo na ozugbo Jọshụa na ụmụ Izrel sụchara ha akwụ, ruo mgbe ha gwụchara,+ ndị fọrọ ndụ n’ime ha agbaakwa ọsọ wee banye n’obodo ndị e wusiri ike,+ 21 ndị agha ahụ niile malitere ịlaghachi n’ebe ha mara ụlọikwuu ha, ka ha lakwuru Jọshụa, n’obodo Makida n’udo. Ọ dịghị nwoke ọ bụla kwuru pịm megide ụmụ Izrel.+ 22 Jọshụa wee sị: “Megheenụ ọnụ ọgba ahụ ma si n’ọgba ahụ kpọpụtara m ndị eze ise ahụ.” 23 Ha wee mee otú ahụ wee si n’ọgba ahụ kpọpụtara ya ndị eze ise ahụ, ya bụ, eze Jeruselem,+ eze Hibrọn,+ eze Jamọt, eze Lekish,+ eze Eglọn.+ 24 O wee ruo na ozugbo ha kpọtaara Jọshụa ndị eze ahụ, Jọshụa kpọrọ ndị ikom niile nke Izrel wee gwa ndị ọchịagha nke ndị agha so ya gaa agha, sị: “Bịanụ nso. Zọkwasịnụ ụkwụ n’azụ olu ndị eze a.”+ Ha wee bịa nso ma zọkwasị ụkwụ n’azụ olu ha.+ 25 Jọshụa wee sị ha: “Egwu atụla unu, ụjọ atụkwala unu.+ Nweenụ obi ike, dịkwanụ ike, n’ihi na ọ bụ otú a ka Jehova ga-eme ndị iro unu niile bụ́ ndị unu na-ebuso agha.”+ 26 E mesịa, Jọshụa gburu ha wee kwụwa ha n’elu osisi ise, ha kwụgidere n’elu osisi ndị ahụ ruo ná mgbede.+ 27 O wee ruo mgbe anyanwụ dara na Jọshụa nyere iwu, ha wee butuo ha n’osisi ndị ahụ,+ tụba ha n’ime ọgba ahụ ha zoro. Ha wee buru nnukwu nkume kwachie ọnụ ọgba ahụ ruo taa. 28 Jọshụa wee weghara Makida+ n’ụbọchị ahụ ma were ihu mma agha bibie ya.+ O gbukwara eze ya na mkpụrụ obi ọ bụla nọ na ya. Ọ hapụghị onye ọ bụla ndụ. O wee mee eze Makida+ ihe o mere eze Jeriko. 29 Jọshụa na Izrel dum wee si na Makida gaa Libna wee buso Libna agha.+ 30 Jehova wee nyefeekwa ya na eze ya n’aka Izrel, ha wee jiri ihu mma agha bibie ya, ma gbuo mkpụrụ obi ọ bụla nọ na ya. Ha ahapụghị onye ọ bụla ndụ n’ime ya. Ha wee mee eze ya ihe ha mere eze Jeriko.+ 31 Jọshụa na Izrel dum sikwa na Libna gaa Lekish,+ wee maa ụlọikwuu megide ya wee buso ya agha. 32 Jehova wee nyefee Lekish n’aka Izrel, ha wee weghara ya n’ụbọchị nke abụọ, ha wee jiri ihu mma agha+ bibie ya na mkpụrụ obi ọ bụla nọ n’ime ya, dị ka ha mere Libna. 33 Ọ bụ mgbe ahụ ka Horam eze Giza+ gara inyere Lekish aka. Jọshụa wee gbuo ya na ndị ya ruo mgbe ọ na-enweghị onye ọ hapụrụ ka ọ fọdụrụ ya ndụ.+ 34 Jọshụa na Izrel dum wee si na Lekish gaa Eglọn,+ maakwa ụlọikwuu megide ya wee buso ya agha. 35 Ha wee weghara ya n’ụbọchị ahụ, malite iji ihu mma agha bibie ya, ha wee gbuo mkpụrụ obi ọ bụla nọ n’ime ya n’ụbọchị ahụ, dị ka ha mere Lekish.+ 36 Jọshụa na Izrel dum wee si n’Eglọn gbagoo Hibrọn,+ malitekwa ibuso ya agha. 37 Ha wee weghara ya ma jiri ihu mma agha bibie ya na eze ya na obodo ya niile nakwa mkpụrụ obi ọ bụla nọ n’ime ya. Ọ hapụghị onye ọ bụla ndụ, dị ka ihe o mere Eglọn. O wee bibie ya na mkpụrụ obi ọ bụla nọ n’ime ya.+ 38 N’ikpeazụ, Jọshụa na Izrel dum lọghachiri Diba+ wee malite ibuso ya agha. 39 O wee weghara ya na eze ya na obodo ya niile, ha wee were ihu mma agha bibie ha, bibiekwa mkpụrụ obi ọ bụla nọ n’ime ya.+ Ọ hapụghị onye ọ bụla ndụ.+ O mere Diba na eze ya ihe o mere Hibrọn, nke bụkwa ihe o mere Libna na eze ya.+ 40 Jọshụa wee bibie ala dum dị n’ógbè bụ́ ugwu ugwu,+ bibiekwa Negeb+ na Shefila+ na ebe ndị dị ná mkpọda+ nakwa eze ha niile. Ọ hapụghị onye ọ bụla ndụ, ihe niile na-eku ume+ ka o bibiri,+ dị ka Jehova bụ́ Chineke Izrel nyere n’iwu.+ 41 Jọshụa wee si na Kedesh-bania+ bibiri ha ruo Geza+ na ala Goshen+ dum, ruokwa Gibiọn.+ 42 Jọshụa wee nwụde eze ndị a niile na ala ha n’otu mgbe,+ n’ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke Izrel bụ onye na-eburu Izrel agha.+ 43 E mesịa, Jọshụa na Izrel dum laghachiri n’ebe ha mara ụlọikwuu ha na Gilgal.+